Anbotek Nchekwa Ọdụ Eletriki bụ otu n'ime ụlọ nyocha mbụ nke ụlọ ọrụ ahụ iji nye nnwale nchekwa na asambodo maka ọrụ dị iche iche na ngwaahịa na ngwaahịa eletriki na ebe obibi. Testingtù na-anwale Anbotek nwere ngwa ọrụ na ngwa nyocha dị elu. Ọ nwere ọgaranya ahụmahụ na nchekwa injinịa na ihe karịrị 20 ọkachamara oru injinia, nke nwere ike n'ụzọ zuru ezu izute mkpa nke ndị ahịa ule na asambodo.
• Nyere ndị ahịa aka iwepụ ihe egwu dị egwu n'oge nrụpụta ngwaahịa, dị ka mkpochapu, ebe dị creepage, na nyocha nke usoro nhazi iji zere ịkpụzi mgbanwe ebu.
• Mee ule eletriki, nyocha nhazi, ma nyefee akụkọ nyocha maka usoro asambodo tupu ngwaahịa.
• Soro ndị asambodo na-ekwukọrịta ma na-emechitere ndị ahịa ha akwụkwọ akwụkwọ anamachọihe ahụ, nke nwere ike ịchekwa oge itinye ma belata nsogbu ndị ahịa na usoro ngwa ahụ.
• Nyere ndị ahịa aka ijikwa nyocha ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma nyere aka dozie ajụjụ ndị a na-achọ na nyocha ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Na-enyere ndị nrụpụta aka aka ịmụrụ ezigbo usoro ọzụzụ ọzụzụ ndị ọrụ nchekwa, ụlọ ọrụ mgbazinye ụlọ nyocha.
Intelligent PD ngwa ngwa odori, ọgụgụ isi inverter mgbagwoju, smart home, smart ezinụlọ ngwa, ọgụgụ isi ọkụ ngwaahịa, ọgbọ ọhụrụ ọmụma technology ngwaahịa, ọgụgụ isi ọdịyo na video ngwaahịa, elu-ọgwụgwụ n'ichepụta ngwá, smart sockets, ọgwụ na ahụ ike, nche na nlekota oru mmesho na njikwa akụrụngwa Chere.